Avakin Life - 3D Virtual World 1.031.00 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.031.00 လြန္ခဲ့ေသာ6ရက္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Avakin Life - 3D Virtual World
Avakin Life - 3D Virtual World ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
AVAKIN ဘဝကို၏ virtual world: သင်, လူတွေနှင့်တွေ့ဆုံရန် chat & တက်ဝတ်စားဆင်ယင်နိုင်သောနေရာအဖြစ်အံ့သြဖွယ် 3D အတွေ့အကြုံကို! သင့်အိမ်နှင့်ခရီးစဉ်ကိုအံ့ဩ, ပရဒိသုတည်နေရာကိုအလှဆင်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်း!
မရေမတွက်နိုင်သောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူခြင်း simulation နှင့်အခန်းကဏ္ဍကိုကစားဂိမ်း!
ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်တက်ကြွ virtual world ပဲ! သင်ကအမြဲဖြစ်လိုသူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှိရာတစ်ဦးကစက္ကန့်ဘဝ။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပွား ဖန်တီး. ပြီးသားဂိမ်းကစားခြင်းဒီပျော်စရာအခန်းကဏ္ဍဒေါင်းလုတ်လုပ်သူကိုအခြားလူများသန်းပေါင်းများစွာ join!
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပွား, ဒီဇိုင်းကိုတက်ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်သင့်အိမ်အလှဆင်။ အသစ်အဝတ်အစားတွေကိုဝယ်အသစ်အံ့သြဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်စုံလင်သောမတ်မတ်ဖန်တီးပါ။ ဖက်ရှင်ကြယ်ပွင့်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ပရဒိသုနေရာများတွင်ပါတီများကိုသွားပါ။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်အိမ်မှာချွတ်ပြပါ။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်။ ယခု AVAKIN ဘဝကို၏ဤအစဉ်အဆက်-ကြီးထွားလာ virtual reality 3D ကမ္ဘာကြီးကို Explore!
သင့်ကိုယ်ပိုင် Avatar CREATE
•သင်သည်သင်၏စုံလင်သောဇာတ်ကောင်, ကိန်းဂဏန်း, ဆံပင်, မျက်စိအရောင်နဲ့အများကြီးပိုပြီးရှေးခယျြနိုငျရှိရာအခန်းက္ပကစားဂိမ်းနှင့်ခြင်း simulation!
•သင်ချင်သလဲဆိုတာသင့်ရဲ့ကိုယ်ပွားတက်ဝတ်စားဆင်ယင်။ ချစ်စရာသို့မဟုတ်အရူး Go - သင့်အကြိုက်ဆုံးစတိုင်လ်ကောက်ခြင်းနှင့်သင်အမြဲသင့်ရဲ့ရလဒ်တွေအိပ်မက်အတွက်ဖြစ်လိုသူတစ်ဦးဖြစ်လာ!
•သင်ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြအဆုံးမဲ့အခွင့်အလမ်းများပေး Virtual အဖြစ်မှန်ကမ္ဘာနှင့်ခြင်း simulation!
•အခြားကစားသမားများနှင့်အတူ Chat မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ်နှင့်သင့်သင်္ဘောသားကိုရှာဖွေ!
•သင့်စုံလင်သောမတ်မတ်ချွတ်ပြရန်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, အကောင်းဆုံးစတိုင်များနှင့်အဝတ်နှင့် ပတ်သက်. အကြံဉာဏ်ရယူပါ။
•အခြားကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သို့မဟုတ်အတူတကွအပေါငျးတို့သအံ့သြဖွယ်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မတ်မတ်လေ့လာစူးစမ်း! သင့်ရဲ့ကိုယ်ပွား၏ဓာတ်ပုံများကို Make နှင့်အထူးဆုအနိုင်ရ Facebook ပေါ်တွင်မျှဝေ!
•ကြောက်မက်ဘွယ် Avakin အဝတ်အစားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ် Express
•အလွပစ္စည်းများရာပေါင်းများစွာမှတဆင့် Browse နှင့်စတိုင်မတ်မတ်နှင့်သင်၏ဗီဖြည့်ပါ။
•တက်ဝတ်စားဆင်ယင် (သို့မဟုတ်ဆင်း), သင့်ရဲ့စတိုင်နှင့်အတူဆော့ကစားနှင့်ဖက်ရှင်သင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှင့်အတူအခြားသူများကိုအလွန်အံ့သြစေ။
•ဆင်မြန်း, ဖိနပ်, အဝတ်, အိတ်, ရတနာနှင့်အခြားအဝတ်အစားပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသန်းပေါင်းများစွာတို့အတွက်ဆိုင်။
•ဖက်ရှင်ကြယ်ပွင့်သို့မဟုတ်မော်ဒယ် Be - ရွေးချယ်မှုဥစ္စာပါ!
•သင်ချင်သလဲဆိုတာသင့်အိမ်အလှဆင် - ခေတ်သစ်ဂန္, ဒါမှမဟုတ်ဟောလိဝုဒ်စတိုင် - သင့်ခံစားချက်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုက်ညီသမျှ။
•မမေ့နိုင်သောပါတီများစည်းရုံးသို့မဟုတ်ပဲသင့်ရဲ့ BFFs နှင့်အတူအချို့သောအရည်အသွေးကိုအချိန်ဖြုန်း, ကျော်သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ခေါ်ပါ။
THE 3D Simulator GAME
•သင်အမြဲဖြစ်လိုသူတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ 3D virtual reality ကမ္ဘာကြီး!
• Chat နှင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏နှငျ့တှေ့ဆုံ
•ကို Message မိတ်ဆွေများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဗဟိုဖြစ်လိမ့်မည်။
•စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေရာများများစွာနှင့်အတူအခန်းက္ပ Play ဂိမ်း! , ကလပ်မှကမ်းခြေသို့သွားပါနှင့်ပိုပြီးအများအပြားသောအရပ်တို့ကိုမ!
• NOW က Avakin ဘဝ၏အံ့သြဖွယ်ဤလောကသို့လှလှပပဒီဇိုင်းမြင်ကွင်းများနှင့်ငုပ် Explore!
Lockwood ထုတ်ဝေရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတိုးတက်စေရန်မည်သို့သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များ & တုံ့ပြန်ချက်ကိုနားထောငျဖို့ခစျြလိမျ့မညျ!
http://www.avakin.com/forums/ မှမေးခွန်းများကို, အကြံပေးချက်များနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုပေးပို့ဖို့ဆက်လက်လေ့လာပါ။
Avakin Life - 3D Virtual World အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Avakin Life - 3D Virtual World အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Avakin Life - 3D Virtual World အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
official-app စတိုး 5.56k 9.36M
Avakin Life - 3D Virtual World ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Avakin Life - 3D Virtual World အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.031.00
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.avakin.com/terms-of-service/#PP
လက်မှတ် SHA1: 45:30:9B:F6:D5:84:5F:08:26:B2:A4:78:93:B0:EE:9E:15:49:5F:8C
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Andrew Brechin
အဖွဲ့အစည်း (O): Lockwood Publishing Ltd
Avakin Life - 3D Virtual World APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ